240p | 29.8MB
720p | 195.7MB
1080p | 208.2MB
မြန်မာနိုင်ငံက ဆိုးဝါးတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အထောက်အထားတွေကို သူတို့အဖွဲ့ ဆက်စုဆောင်းနေ တယ်လို့ IIMM အကြီးအကဲ Nicholas Koumjian ကပြောပါတယ်။ ၂၀၁၁ ကတည်းက ဖြစ်တဲ့ ကြီးလေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးပြစ်မှု အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းသုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကို မျှဝေမှာပါ။ မစုမြတ်မွန် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ IIMM အကြီးအကဲအနေနဲ့ Myanmar Mechanism လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ IIMM ဆိုတာ ရှင်းပြပါရှင့်၊ Myanmar Mechanism ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တာဝန်တွေက ဘာပါလဲ၊ ဒီတာဝန်တွေကျေဖို့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ Myanmar Mechanism ဆိုတာကတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်း လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ယန္တရားတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို အပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲကစလို့ ဆိုးဝါးတဲ့ နိုင်ငံတကာပြစ်မှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေ ချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ပြစ်မှုတွေရဲ့ အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းဖို့၊ သိမ်းဆည်းဖို့နဲ့ သုံးသပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ အကြုံးဝင်ပါတယ်။ ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုမြောက်တဲ့အမှုတွေကို အဖွဲ့အစည်းတခုအပေါ် ကျူးလွန်တာဖြစ်ဖြစ်၊ လူတဦးတယောက်က ကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ထဲက စတာဖြစ်ပြီး၊ ခွင့်ပြုတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက မပြင်မချင်း ဆက်ပြီး စုံစမ်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့နက်ဖြန် နောက်သီတင်းပါတ်တွေအထိ ဆက်ပြီး အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းနေမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်ပေးထားတဲ့ နောက်တချက်က ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံအဆင့် တရားရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တရားစွဲတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်တာ မျှဝေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ရရှိတဲ့ ဒီအချက်အလက်တွေကို ဆန်းစစ်ပြီး ဒီအမှုမှာ ဘယ်သူက တာဝန်ရှိသလဲဆိုတာကို ကြိုးစားသုံးသပ်ပါတယ်။ အမှုတည်ဆောက်ထားပြီး တနေ့နေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာအမှုကို စစ်ဆေးတဲ့ တရားရုံးတွေကို မျှဝေနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။
မေး ။ ။ စောစောက မစ္စတာခွမ်းဂျန် ရှင်းပြတဲ့ထဲမှာပါသလိုပဲ IIMM ကို စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်က ရှမ်း၊ ကချင်၊ ရခိုင်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အထောက်အထားတွေကို စုဆောင်းမှတ်တမ်းပြုစုထားဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်း ရယူမှတ်တမ်းပြုထားတယ်ဆိုတော့ လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်တွေကို တိုးချဲ့ လိုက်တဲ့သဘောပါလား။
ဖြေ ။ ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေကို တိုးပေးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ IIMM ကို စတင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ချိန်ထဲက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေကို စုံစမ်းဖို့ တာဝန်ပေးထားတာပါ။ ခင်ဗျားပြောတာ မှန်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက IIMM ကို ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ချိန်ကတော့ ရခိုင်၊ ရှမ်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုအထောက်အထားတွေကို အဓိက စုဆောင်းဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်နေရာမှာမဆို ကျူးလွန်တဲ့ ကြီးလေးတဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းရမယ်လို့ တာဝန်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ အချိန်ကန့်သတ်ချက်လည်း လုပ်မထားပါဘူး။ ကျုးလွန်သူတွေအနေနဲ့ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု မရှိရင်၊ အခုလိုကြီးလေးတဲ့ ပြစ်မှုတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ချိုးဖောက်နေမှာကို လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက စိုးရိမ်လို့ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ အထောက်အထားတွေကို စုစည်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တခုကို တည်ထောင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ တနေ့ကျရင် တာဝန်ရှိသူတွေ တာဝန်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တချက်ကလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက အခုလို အထောက်အထားတွေကို စုဆောင်းနေတယ်ဆိုတာ သိရင် တချို့ကျူးလွန်မှုမျိုးတွေကို ထပ်ပြီး ကျူးလွန်ဖို့ တွန့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ IIMM ကို ဖွဲ့စည်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ IIMM က ဘယ်လိုအချက်အလက်၊ သက်သေ၊ အထောက်အထားတွေကို ရယူ စုဆောင်းနေပါသလဲ၊ တကယ်လို့ အဲဒီအချက်အလက်တွေ ပို့ပေးချင်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ ပို့ပေးတဲ့အချက်တွေ အလဟာသ မဖြစ်ရအောင် ဘာတွေသတိပြုသင့်ပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုလို ကြီးလေးတဲ့ နိုင်ငံတကာပြစ်မှုမြောက်တဲ့ အမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပါတယ်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုကတော့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ပြစ်မှုတွေပါ။ ဂျီနီဗာ ပဋိဥာဉ် (Geneva Convention) ပါအချက်တွေကို ချိုးဖောက်တဲ့၊ ဥပဒေစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်တဲ့ အမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုမျိုးကျတော့ အရပ်သားတွေအပေါ် စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အခါ ကျုးလွန်တဲ့ ကြီးလေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အခြေခံတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကို ဖျက်စီးပြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုပြစ်မှုတွေ ကျုးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားမျိုးစုံကို စုဆောင်းပါတယ်။ ဒီပြစ်မှုတွေအတွက် ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အထောက်အထားတွေကိုလည်း စုဆောင်းပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေ သက်သေတွေကို ကျွန်တော်တို့ စကားပြောချင်ပါတယ်။ ဒီအမှုတွေကျုးလွန်ဖို့ စီစဉ်သူတွေ အမိန့်ပေးသူတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် ထဲထဲဝင်ဝင် အကြောင်းအချက်တွေ သိထားသူတွေနဲ့ စကားပြောနိုင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ အလားတူပြစ်မှုတွေ စုံစမ်းဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲလို အတွင်းသတင်းပေးနိုင်သူမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းတဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေ ထိခိုက်မှာစိုးလို့ သိပ်မပြောချင်ပါဘူး။ ပြောနိုင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို အချက်အလက်ပေးချင်လို့ ဆက်သွယ်လာသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာက ဓါတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေပေးတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်တာလဲ ဘယ်နေ့က ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ။ အဲဒီဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွေကို ဘယ်သူရိုက်ထားတာလဲဆိုတာ ပြောပြဖို့ မေးပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တွေ့နိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုမျိုးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လဲ အချက်အလက်ရနိုင်တဲ့အတွက် အဲဒါမျိုးတွေပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီ ဆက်သွယ်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့အတွက် အန္တရာယ်မရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့လုံခြုံရေးက ကျွန်တော်တို့အတွက် သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ (https://iimm.un.org/) website ပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ပို့တဲ့အချက်အလက်တွေ ကြားဖြတ်မယူနိုင်အောင် အင်မတန်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ Proton Mail စနစ်ကို သုံးပါတယ်။ တခုရှိတာက ဆက်သွယ်တဲ့သူကလည်း အဲဒီ Proton Mail စနစ်ကို သုံးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ Message ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Signal လို စိတ်ချလုံခြုံတဲ့ စနစ်ကို သုံးပါလို့ ကျွန်တော်ကတော့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ IIMM က ဘယ်သူမဆိုပေးပို့တဲ့ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေကို ရယူစုဆောင်းတဲ့ open-source investigation ကို လုပ်နေတာဆိုတော့ ရရှိတာတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်မှာ အချက်အလက်တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေပါတဲ့ message မက်ဆေ့ခ်ျပေါင်း - သတင်းပေးမှုပေါင်း (၂) သိန်းလောက် ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရသမျှ မက်ဆေ့ခ်ျတွေအားလုံးကို ကြည့်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း နောက်ထပ်ဆက်ပြီး ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ စုဆောင်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ရေရှည်သိမ်းထားမှာပါ။ စိန်ခေါ်မှုတခုက ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ အချက်အလက် ပမာဏကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အင်မတန်လုံခြုံပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ အချက်အလက်သိမ်းစနစ်ကို လုပ်ရပါတယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ ဒီအချက်အလက်တွေကို သုံးသပ်လို့ရမှာပါ။ ဥပမာ ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေက ဆင်တူဖြစ်နေတာတွေလား ဆိုတာမျိုး သိနိုင်အောင် လုပ်ထားရပါတယ်။
မေး ။ ။ စောစောက Mr. Koumjian ရှင်းပြသွားတဲ့အထဲမှာ IIMM ရဲ့ အဓိက အလုပ်တခုက အဆိုးဝါးဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းပြီး သုံးသပ်ပေးရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဖွဲ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို သွားလို့မရတော့ အခုလို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်လို့ ပြောတဲ့နေရာတွေကို ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့ မတွေ့ရပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် မှန်တယ်ဆိုတာ သေချာအောင် လုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ မျက်မြင်သက်သေတွေ အများကြီးရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို မသွားနိုင်တာက အခက်အခဲတခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ရာဇဝတ်မှုတွေ စုံစမ်းရင် အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာ သွားကြည့်တာက စရတာပါ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ အထောက်အထားတွေ စုဆောင်းဖို့ တခြားနည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့က မြန်မာနိုင်ငံထဲက လာတဲ့သူတွေဆီက ရတယ်။ အဲဒီလိုရသမျှ အထောက်အထားတွေအားလုံးကို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ သုံးနိုင်တဲ့အထိ စုစည်းသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တချို့က အခုချက်ချင်း အသုံးဝင်ချင်မှ ဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် နောင် (၁) နှစ် (၂) နှစ်လောက်မှာ ရတဲ့ အထောက်အထားတွေအရ သိပ်ကို အသုံးဝင်တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရသမျှ အချက်အလက်တွေကို ထိမ်းသိမ်းထားဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အခုဆို ကျွန်တော်တို့မှာ ဝန်ထမ်း (၅၀) လောက် ရှိပါတယ်။ လုပ်စရာတွေလည်း အများကြီးပါ။ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းဖို့ သုံးသပ်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ရှိပါတယ်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ နိုင်ငံတကာရှေ့နေတွေ ရှိပါတယ်။ ရရှိတဲ့ အချက်အလက် အများကြီးကို သုံးသပ်နိုင်တဲ့ ဝါရင့် မှုခင်းစစ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတင်မက စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေ၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ အချက်အလက်တွေကို အဆင်မြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူတွေအပြင် မျက်မြင်သက်သေတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ IIMM အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ သွားနိုင်ဖို့ တကြိမ်မက ကြိုးစားခဲ့ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ နောင်မှာရော မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာအောင် စွဲဆောင်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲက နေရာတွေ သွားနိုင်ဖို့ ထပ်ကြိုးစားမယ့် အစီအစဉ်တွေရှိပါလား။
ဖြေ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲ သွားနိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အထိ ဆက်ပြီးတောင်းသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သွားနိုင်ဖို့လည်း ခွင့်ပြုချက် တောင်းထားဖူးပါတယ်။ သူတို့ဘက်က ဘယ်လို တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲသွားနိုင်ဖို့ သူတို့ ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်ဖြစ်စေ မပေးသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အထောက်အထားတွေ ရနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ဆက်လက်လုပ်သွားမှာပါ။
မေး ။ ။ IIMM ရဲ့  နောက်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တခုက ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တချို့နဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ အမှုတွဲတွေကို သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ တရားရုံးတွေနဲ့ မျှဝေဖို့ပါ။ အဲတော့ IIMM က ပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း မှန်ကန်စိတ်ချရတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေလိုက်နာတဲ့ တရားရုံးတွေ ခုံရုံးတွေမှာ သုံးနိုင်မယ်လို့ ဘယ်လို အာမခံနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ နိုင်ငံအဆင့်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကြားနာတဲ့ အမှုတွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေမျိုးစုံ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးကြားနာမှုတွေမှာ လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေအတိုင်း အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါ။ တခါတလေကျလို့ရှိရင် သက်သေအထောက်အထားရဖို့ ဇစ်မြစ်နေရာတွေဆီ သွားလို့မရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးကျရင် တခြားဖြစ်ရပ်အထောက်အထားတွေနဲ့ ဆက်စပ်စဉ်းစားပြီးတော့ သူ့ရဲ့ မှန်ကန်စိတ်ချရမှုကို အတည်ပြုယူနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံးတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာ ဒါမျိုးက ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်တရားရုံးမှာစစ်တဲ့ အမှုတွေအပြင် အထောက်အထား စုဆောင်းတဲ့ အဖွဲ့တွေ စုစုပေါင်း (၇) မျိုးမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဆီ သွားပြီးစုံစမ်းနိုင်ဖို့၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေဆီသွားပြီး၊ မေးမြန်းခွင့်မရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုမျိုးတွေ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ စစ်ဆေးတဲ့ အမှုမျိုးတွေထက် ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ အထောက်အထားတွေ ရရှိအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ လက်ရှိမှာဆိုရင် မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ICC, ICJ နဲ့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံက တရားရုံးတွေမှာ တရားစွဲထားတဲ့ အမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအမှုတွေအတွက်ရော IIMM က ဘယ်လို အဆက်အသွယ်လုပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အပေါ် မျှမျှတတ တရားစီရင်ဖို့ လိုလားတယ်၊ စီရင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံအဆင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် တရားရုံးတွေမှာ အမှုကြားနာစစ်ဆေးတဲ့အခါ အချက်အလက်တွေ မျှဝေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ IIMM ကို အဓိက ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အကာအကွယ် ပေးဖို့လုပ်တဲ့ ဟန်ပြစစ်ဆေးမှုမျိုး မဖြစ်ရဘူး။ စွပ်စွဲခံရသူရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလည်း လေးစားပြီး အမှုမှာ ပါတ်သက်နေသူအားလုံးအတွက် မျှမျှတတ ကြားနာ တရားစီရင်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံး ICC နဲ့ နိုင်ငံတကာ တရားမျှတမှုခုံရုံး ICJ က အမှုတွေမှာ IIMM အနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ကျွန်တော်တို့ကို အထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အဲဒီတရားရုံး (၂) ခုရဲ့ တရားစီရင်ရေးက ကွာခြားပါတယ်။ တရားရုံး (၂) ခုလုံးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ အထောက်အထားတွေ ပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မျှဝေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့ အထောက်အထားတွေကိုပဲ ကျွန်တော်တို့က မျှဝေပါတယ်။
ဒီမှာ VOA သောတရှင်တွေကို အရေးကြီးတာတချက် ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဆီ အချက်အလက် အထောက်အထားတွေပေးတဲ့အခါ အဲဒီအထောက်အထားတွေကို တရားစီရင်စစ်ဆေးမှုတွေမှာ သုံးခွင့်ပေးမလားလို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က မေးပါတယ်။ သုံးခွင့်ပေးပါတယ်လို့ ခွင့်ပြုတဲ့ အထောက်အထားတွေကိုပဲ ကျွန်တော်တို့က မျှဝေခွင့် ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့က မျှဝေခွင့်ပြုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဒီလိုမျှဝေလို့ သူတို့အတွက် (ဒါမှမဟုတ်) တခြားတယောက်ယောက်အတွက် အန္တရာယ်ရှိမလားဆိုတာ ထပ်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က သုံးသပ်ရင် တရားရုံးတွေကို မပေးပါဘူး။ အန္တရာယ် မရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့မှ မျှဝေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစုမြတ်မွန် ။ ။ Thank you so much, Mr. Koumjian. Thank you for giving time to answer the questions.
မွနျမာနိုငျငံမှာဖွဈတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှု အထောကျအထားတှကေို ဆကျလကျစုဆောငျး သိမျးဆညျးနပေါတယျလို့ IIMM ရဲ့ အကွီးအကဲက ဗီအိုအမွေနျမာပိုငျးကို ပွောပါတယျ။ ရှမျး၊ ကခငျြနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျတှမှော ၂၀၁၁ ခုနှဈထဲက ဖွဈနတေဲ့ ကွီးလေးတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ပွဈမှုအထောကျအထားတှေ စုဆောငျးသုံးသပျပွီး၊ နိုငျငံတကာဥပဒနေဲ့အညီ စဈဆေးတဲ့ တရားရုံးတှကေို မြှဝဖေို့ IIMM (ချေါ) Independent Investigative Mechanism for Myanmar / Myanmar Mechanism ကို ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီက တာဝနျပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာတနိုငျငံလုံးမှာ ဖွဈသမြှ ကွီးလေးတဲ့ ပွဈမှုကြူးလှနျမှုမှနျသမြှ ဆကျလကျစုဆောငျးသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ အကွီးအကဲ Nicholas Koumjian က ပွောပါတယျ။ မစုမွတျမှနျက ဆကျသှယျမေးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ IIMM အကွီးအကဲအနနေဲ့ Myanmar Mechanism လို့ အတိုကောကျချေါတဲ့ IIMM ဆိုတာ ရှငျးပွပါရှငျ့၊ Myanmar Mechanism ရဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့၊ တာဝနျတှကေ ဘာပါလဲ၊ ဒီတာဝနျတှကေဖြေို့ ဘယျလိုဆောငျရှကျနပေါလဲ။
ဖွေ ။ ။ Myanmar Mechanism ဆိုတာကတော့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ အဆငျ့အမွငျ့ဆုံးအဖှဲ့အစညျး လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီက ဖှဲ့စညျးပေးထားတဲ့ ယန်တရားတခု ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကို အပျနှငျးထားတဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့တှကေတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ၂၀၁၁ ခုနှဈထဲကစလို့ ဆိုးဝါးတဲ့ နိုငျငံတကာပွဈမှုတှေ၊ နိုငျငံတကာဥပဒတှေေ ခြိုးဖောကျကြူးလှနျတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ပွဈမှုတှရေဲ့ အထောကျအထားတှေ စုဆောငျးဖို့၊ သိမျးဆညျးဖို့နဲ့ သုံးသပျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ လုပျပိုငျခှငျ့က မွနျမာတနိုငျငံလုံးမှာ အကွုံးဝငျပါတယျ။ ကွီးလေးတဲ့ နိုငျငံတကာ ပွဈမှုမွောကျတဲ့အမှုတှကေို အဖှဲ့အစညျးတခုအပျေါ ကြူးလှနျတာဖွဈဖွဈ၊ လူတဦးတယောကျက ကြူးလှနျတာပဲဖွဈဖွဈ ကြူးလှနျတယျဆိုရငျ အထောကျအထားတှေ စုဆောငျးဖို့ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ အပျနှငျးထားပါတယျ။
၂၀၁၁ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ (၁) ရကျနထေဲ့က စတာဖွဈပွီး၊ ခှငျ့ပွုတဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့ကို လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီက မပွငျမခငျြး ဆကျပွီး စုံစမျးနမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒီနနေ့ကျဖွနျ နောကျသီတငျးပါတျတှအေထိ ဆကျပွီး အခကျြအလကျတှေ စုဆောငျးနမှောပါ။ ကြှနျတျောတို့ကို လုပျပိုငျခှငျ့ တာဝနျပေးထားတဲ့ နောကျတခကျြက ပွဈမှုကြူးလှနျသူတှကေို နိုငျငံတကာ တရားရုံးမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ နိုငျငံအဆငျ့ တရားရုံးမှာပဲဖွဈဖွဈ တရားစှဲတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့ ရရှိထားတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို သုံးသပျပွီး လိုအပျတာ မြှဝဖေို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့က ရရှိတဲ့ ဒီအခကျြအလကျတှကေို ဆနျးစဈပွီး ဒီအမှုမှာ ဘယျသူက တာဝနျရှိသလဲဆိုတာကို ကွိုးစားသုံးသပျပါတယျ။ အမှုတညျဆောကျထားပွီး တနနေ့မှေ့ာ သကျဆိုငျရာအမှုကို စဈဆေးတဲ့ တရားရုံးတှကေို မြှဝနေိုငျဖို့ ပွငျဆငျထားရပါတယျ။
မေး ။ ။ စောစောက မစ်စတာခှမျးဂနျြ ရှငျးပွတဲ့ထဲမှာပါသလိုပဲ IIMM ကို စတငျဖှဲ့စညျးခြိနျက ရှမျး၊ ကခငျြ၊ ရခိုငျမှ ၂၀၁၁ ခုနှဈထဲက ဖွဈခဲ့တဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှု အထောကျအထားတှကေို စုဆောငျးမှတျတမျးပွုစုထားဖို့ ဖွဈတယျလို့ နားလညျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဖဖေျောဝါရီ (၁) ရကျ အာဏာသိမျးပွီးနောကျ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့တှရေဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှကေိုလညျး ရယူမှတျတမျးပွုထားတယျဆိုတော့ လုပျငနျးလုပျပိုငျခှငျ့ တာဝနျတှကေို တိုးခြဲ့လိုကျတဲ့သဘောပါလား။
ဖွေ ။ ။ လုပျပိုငျခှငျ့တာဝနျတှကေို တိုးပေးလိုကျတာ မဟုတျပါဘူး။ IIMM ကို စတငျ ဖှဲ့စညျးတညျထောငျခြိနျထဲက မွနျမာတနိုငျငံလုံးမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ ပွဈမှုတှကေို စုံစမျးဖို့ တာဝနျပေးထားတာပါ။ ခငျဗြားပွောတာ မှနျပါတယျ။ လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီက IIMM ကို ဖှဲ့စညျးပေးလိုကျခြိနျကတော့ ရခိုငျ၊ ရှမျးနဲ့ ကခငျြပွညျနယျတှမှော ဖွဈခဲ့တဲ့ ပွဈမှုအထောကျအထားတှကေို အဓိက စုဆောငျးဖို့ တာဝနျပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ဘယျနရောမှာမဆို ကြူးလှနျတဲ့ ကွီးလေးတဲ့၊ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှကေို စုံစမျးရမယျလို့ တာဝနျပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဘယျတုနျးကမှ အခြိနျကနျ့သတျခကျြလညျး လုပျမထားပါဘူး။ ကြုးလှနျသူတှအေနနေဲ့ တာဝနျခံမှု၊ တာဝနျယူမှု မရှိရငျ၊ အခုလိုကွီးလေးတဲ့ ပွဈမှုတှေ ထပျခါထပျခါ ခြိုးဖောကျနမှောကို လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီက စိုးရိမျလို့ ဖွဈမှာပါ။ ဒါကွောငျ့လဲ အထောကျအထားတှကေို စုစညျးသိမျးဆညျးထားတဲ့ အဖှဲ့တခုကို တညျထောငျပေးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါမှ တနကေ့ရြငျ တာဝနျရှိသူတှေ တာဝနျခံရမှာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျတခကျြကလညျး နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးက အခုလို အထောကျအထားတှကေို စုဆောငျးနတေယျဆိုတာ သိရငျ တခြို့ကြူးလှနျမှုမြိုးတှကေို ထပျပွီး ကြူးလှနျဖို့ တှနျ့သှားနိုငျတယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ IIMM ကို ဖှဲ့စညျးပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ IIMM က ဘယျလိုအခကျြအလကျ၊ သကျသေ၊ အထောကျအထားတှကေို ရယူ စုဆောငျးနပေါသလဲ၊ တကယျလို့ အဲဒီအခကျြအလကျတှေ ပို့ပေးခငျြသူတှအေနနေဲ့ သူတို့ ပို့ပေးတဲ့အခကျြတှေ အလဟာသ မဖွဈရအောငျ ဘာတှသေတိပွုသငျ့ပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ လူသားထုအပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ပွဈမှု၊ စဈရာဇဝတျမှု ဒါမှမဟုတျ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုလို ကွီးလေးတဲ့ နိုငျငံတကာပွဈမှုမွောကျတဲ့ အမှုတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို စုဆောငျးပါတယျ။ စဈရာဇဝတျမှုကတော့ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခတှနေဲ့ ဆကျစပျတဲ့ ပွဈမှုတှပေါ။ ဂြီနီဗာ ပဋိဉာဉျ (Geneva Convention) ပါအခကျြတှကေို ခြိုးဖောကျတဲ့၊ ဥပဒစေညျးကမျးတှကေို ခြိုးဖောကျတဲ့ အမှုတှေ ဖွဈပါတယျ။ လူသားထုအပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ ပွဈမှုမြိုးကတြော့ အရပျသားတှအေပျေါ စနဈတကြ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ပွဈမှတျထားတဲ့အခါ ကြုးလှနျတဲ့ ကွီးလေးတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုမြိုး ဖွဈပါတယျ။
လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုကတော့ ရညျရှယျခကျြရှိရှိနဲ့ လူမြိုးရေး၊ ဘာသာရေး အခွခေံတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးတှကေို ဖကျြစီးပွဈတာ ဖွဈပါတယျ။ ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့က ဒီလိုပွဈမှုတှေ ကြုးလှနျတယျဆိုတဲ့ အထောကျအထားမြိုးစုံကို စုဆောငျးပါတယျ။ ဒီပွဈမှုတှအေတှကျ ဘယျသူတှမှော တာဝနျရှိသလဲဆိုတာ သိနိုငျမယျ့ အထောကျအထားတှကေိုလညျး စုဆောငျးပါတယျ။ ပွဈမှုကြူးလှနျခံရသူတှေ သကျသတှေကေို ကြှနျတျောတို့ စကားပွောခငျြပါတယျ။ ဒီအမှုတှကြေုးလှနျဖို့ စီစဉျသူတှေ အမိနျ့ပေးသူတှကေို ဖျောထုတျဖို့အတှကျ ထဲထဲဝငျဝငျ အကွောငျးအခကျြတှေ သိထားသူတှနေဲ့ စကားပွောနိုငျဖို့ သိပျအရေးကွီးတယျဆိုတာ အလားတူပွဈမှုတှေ စုံစမျးဖူးတဲ့ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံအရ ပွောခငျြပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဲလို အတှငျးသတငျးပေးနိုငျသူမြိုးတှေ ကြှနျတျောတို့ကို ဆကျသှယျလာဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ နညျးမြိုးစုံနဲ့ အထောကျအထားတှေ စုဆောငျးတဲ့ အသေးစိတျကိုတော့ ကြှနျတျောတို့ အလုပျတှေ ထိခိုကျမှာစိုးလို့ သိပျမပွောခငျြပါဘူး။ ပွောနိုငျတာကတော့ ကြှနျတျောတို့ကို အခကျြအလကျပေးခငျြလို့ ဆကျသှယျလာသူတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
သူတို့ကို ကြှနျတျောတို့တောငျးဆိုတာက ဓါတျပုံတှေ ဗီဒီယိုတှပေေးတယျဆိုရငျ ဘာဖွဈတာလဲ ဘယျနကေ့ ဘယျမှာဖွဈတာလဲ။ အဲဒီဓါတျပုံ ဗီဒီယိုတှကေို ဘယျသူရိုကျထားတာလဲဆိုတာ ပွောပွဖို့ မေးပါတယျ။ အငျတာနကျပျေါမှာ တှေ့နိုငျတဲ့ ဗီဒီယိုမြိုးဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့လဲ အခကျြအလကျရနိုငျတဲ့အတှကျ အဲဒါမြိုးတှပေေးဖို့ မလိုပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ဆီ ဆကျသှယျမယျ့သူတှအေနနေဲ့ သူတို့အတှကျ အန်တရာယျမရှိနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှနေဲ့ ဆကျသှယျဖို့ ပွောပါတယျ။ သူတို့လုံခွုံရေးက ကြှနျတျောတို့အတှကျ သိပျအရေးကွီးပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ (https://iimm.un.org/) website ပျေါမှာလညျး ကြှနျတျောတို့ကို ဘယျလို ဆကျသှယျလို့ရတယျဆိုတာ ရှငျးပွထားပါတယျ။ ပို့တဲ့အခကျြအလကျတှေ ကွားဖွတျမယူနိုငျအောငျ အငျမတနျလုံခွုံစိတျခရြတဲ့ Proton Mail စနဈကို သုံးပါတယျ။ တခုရှိတာက ဆကျသှယျတဲ့သူကလညျး အဲဒီ Proton Mail စနဈကို သုံးဖို့တော့ လိုပါတယျ။ Message ပို့ခငျြတယျဆိုရငျလညျး Signal လို စိတျခလြုံခွုံတဲ့ စနဈကို သုံးပါလို့ ကြှနျတျောကတော့ အကွုံပွုခငျြပါတယျ။
မေး ။ ။ IIMM က ဘယျသူမဆိုပေးပို့တဲ့ အထောကျအထား အခကျြအလကျတှကေို ရယူစုဆောငျးတဲ့ open-source investigation ကို လုပျနတောဆိုတော့ ရရှိတာတှကေို ဘယျလို ကိုငျတှယျပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ စိနျချေါမှုတှေ ရှိပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အာဏာသိမျးမှုဖွဈပွီးနောကျမှာ အခကျြအလကျတှေ၊ ဓါတျပုံတှေ၊ ဗီဒီယိုတှပေါတဲ့ message မကျဆခြေျ့ပေါငျး - သတငျးပေးမှုပေါငျး (၂) သိနျးလောကျ ရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ရသမြှ မကျဆခြေျ့တှအေားလုံးကို ကွညျ့ပါတယျ။ ဓါတျပုံတှေ၊ ဗီဒီယိုတှကေိုလညျး နောကျထပျဆကျပွီး ဆနျးစဈနိုငျဖို့ စုဆောငျးသိမျးထားပါတယျ။ ဒီအခကျြအလကျတှကေို ကြှနျတျောတို့ ရရှေညျသိမျးထားမှာပါ။ စိနျချေါမှုတခုက ကြှနျတျောတို့ရတဲ့ အခကျြအလကျ ပမာဏကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ အငျမတနျလုံခွုံပွီး အဆငျ့မွငျ့တဲ့ အခကျြအလကျသိမျးစနဈကို လုပျရပါတယျ။ ဒါမှ ကြှနျတျောတို့ ဒီအခကျြအလကျတှကေို သုံးသပျလို့ရမှာပါ။ ဥပမာ ရတဲ့ဗီဒီယိုတှကေ ဆငျတူဖွဈနတောတှလေား ဆိုတာမြိုး သိနိုငျအောငျ လုပျထားရပါတယျ။
မေး ။ ။ စောစောက Mr. Koumjian ရှငျးပွသှားတဲ့အထဲမှာ IIMM ရဲ့ အဓိက အလုပျတခုက အဆိုးဝါးဆုံး လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စတှကေို စုဆောငျးသိမျးဆညျးပွီး သုံးသပျပေးရတာပါ။ ဒါပမေဲ့ အဖှဲ့အနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံထဲကို သှားလို့မရတော့ အခုလို လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျတယျလို့ ပွောတဲ့နရောတှကေို ကိုယျတိုငျမကျြစိနဲ့ မတှေ့ရပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီရရှိထားတဲ့ အခကျြအလကျတှကေ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စတှဟော တကယျဖွဈခဲ့တယျ မှနျတယျဆိုတာ သခြောအောငျ လုပျဖို့ ဘယျလောကျခကျခဲပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ ပွဈမှုကြူးလှနျခဲ့တဲ့နရောတှနေဲ့ မကျြမွငျသကျသတှေေ အမြားကွီးရှိတဲ့ မွနျမာနိုငျငံထဲကို မသှားနိုငျတာက အခကျအခဲတခု ဖွဈတယျဆိုတာကတော့ သခြောပါတယျ။ ပုံမှနျဆို ရာဇဝတျမှုတှေ စုံစမျးရငျ အခငျးဖွဈတဲ့နရော သှားကွညျ့တာက စရတာပါ။ ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့အတှကျ ပိုပွီးစိနျချေါမှုတှေ ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့မှာ အထောကျအထားတှေ စုဆောငျးဖို့ တခွားနညျးလမျးတှေ ရှိပါတယျ။ တခြို့က မွနျမာနိုငျငံထဲက လာတဲ့သူတှဆေီက ရတယျ။ အဲဒီလိုရသမြှ အထောကျအထားတှအေားလုံးကို နောငျနှဈပေါငျးမြားစှာ သုံးနိုငျတဲ့အထိ စုစညျးသိမျးဆညျးထားပါတယျ။ အခုလကျရှိ ရရှိထားတဲ့ အခကျြအလကျတခြို့က အခုခကျြခငျြး အသုံးဝငျခငျြမှ ဝငျနိုငျမှာ ဖွဈပမေယျ့ နောငျ (၁) နှဈ (၂) နှဈလောကျမှာ ရတဲ့ အထောကျအထားတှအေရ သိပျကို အသုံးဝငျတာမြိုး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ရသမြှ အခကျြအလကျတှကေို ထိမျးသိမျးထားဖို့ သိပျကို အရေးကွီးပါတယျ။ အခုဆို ကြှနျတျောတို့မှာ ဝနျထမျး (၅၀) လောကျ ရှိပါတယျ။ လုပျစရာတှလေညျး အမြားကွီးပါ။ အခကျြအလကျတှေ စုဆောငျးဖို့ သုံးသပျဖို့ စိနျချေါမှုတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့မှာ သကျဆိုငျရာ နယျပယျမှာ ကြှမျးကငျြသူတှေ ရှိပါတယျ။ စဈရာဇဝတျမှုတှေ၊ လူသားထုအပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ ပွဈမှုတှနေဲ့ဆိုငျတဲ့ ဥပဒတှေအေကွောငျး ကောငျးကောငျးနားလညျတဲ့ နိုငျငံတကာရှနေ့တှေေ ရှိပါတယျ။ ရရှိတဲ့ အခကျြအလကျ အမြားကွီးကို သုံးသပျနိုငျတဲ့ ဝါရငျ့ မှုခငျးစဈတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါတငျမက စုံစမျးစဈဆေးသူတှေ၊ လုံခွုံရေးဝနျထမျးတှေ၊ အခကျြအလကျတှကေို အဆငျမွငျ့ ကြှမျးကငျြစှာ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျသူတှအေပွငျ မကျြမွငျသကျသတှေကေို အကာအကှယျပေးတဲ့ ဝနျထမျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
မေး ။ ။ IIMM အနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံထဲ သှားနိုငျဖို့ တကွိမျမက ကွိုးစားခဲ့ဖူးမယျ ထငျပါတယျ။ နောငျမှာရော မွနျမာခေါငျးဆောငျတှေ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလာအောငျ စှဲဆောငျဖို့၊ မွနျမာနိုငျငံထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ကုလသမဂ်ဂအဖှဲ့အစညျးကတဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံထဲက နရောတှေ သှားနိုငျဖို့ ထပျကွိုးစားမယျ့ အစီအစဉျတှရှေိပါလား။
ဖွေ ။ ။ မွနျမာနိုငျငံထဲ သှားနိုငျဖို့ ခှငျ့ပွုခကျြရတဲ့အထိ ဆကျပွီးတောငျးသှားမှာပါ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ သှားနိုငျဖို့လညျး ခှငျ့ပွုခကျြ တောငျးထားဖူးပါတယျ။ သူတို့ဘကျက ဘယျလို တုံ့ပွနျမယျဆိုတာကတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ မွနျမာနိုငျငံထဲသှားနိုငျဖို့ သူတို့ ခှငျ့ပွုခကျြပေးသညျဖွဈစေ မပေးသညျဖွဈစေ ကြှနျတျောတို့ကတော့ အထောကျအထားတှေ ရနိုငျဖို့ ကြှနျတျောတို့ လုပျနိုငျတဲ့နညျးတှနေဲ့ ဆကျလကျလုပျသှားမှာပါ။
မေး ။ ။ IIMM ရဲ့ နောကျအရေးကွီးတဲ့ အလုပျတခုက ရရှိထားတဲ့ အခကျြအလကျတခြို့နဲ့ ပွဈမှုကြူးလှနျထားတဲ့ အမှုတှဲတှကေို သီးခွားလှတျလပျတဲ့ တရားရုံးတှနေဲ့ မြှဝဖေို့ပါ။ အဲတော့ IIMM က ပေးတဲ့ အခကျြအလကျတှဟော (၁၀၀) ရာခိုငျနှုနျး မှနျကနျစိတျခရြတယျ။ နိုငျငံတကာ ဥပဒတှေလေိုကျနာတဲ့ တရားရုံးတှေ ခုံရုံးတှမှော သုံးနိုငျမယျလို့ ဘယျလို အာမခံနိုငျအောငျ ဘယျလိုလုပျပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ နိုငျငံအဆငျ့၊ နိုငျငံတကာအဆငျ့ ပွဈမှုဆိုငျရာ စဈဆေးကွားနာတဲ့ အမှုတှမှော နှဈပေါငျးမြားစှာ အတှေ့အကွုံရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှမြေိုးစုံ ကြှနျတျောတို့မှာ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဘကျကတော့ ပွဈမှုဆိုငျရာ စဈဆေးကွားနာမှုတှမှော လိုကျနာဆောငျရှကျသငျ့တဲ့ ကိစ်စတှအေတိုငျး အကောငျးဆုံးလုပျသှားမှာပါ။ တခါတလကေလြို့ရှိရငျ သကျသအေထောကျအထားရဖို့ ဇဈမွဈနရောတှဆေီ သှားလို့မရတဲ့ အခွအေနမြေိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ အဲဒီအခါမြိုးကရြငျ တခွားဖွဈရပျအထောကျအထားတှနေဲ့ ဆကျစပျစဉျးစားပွီးတော့ သူ့ရဲ့ မှနျကနျစိတျခရြမှုကို အတညျပွုယူနိုငျပါတယျ။
နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျတရားရုံးတှေ၊ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမှု စုံစမျးစဈဆေးမှုတှမှော ဒါမြိုးက ကွုံတှရေ့လေ့ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ရာဇဝတျတရားရုံးမှာစဈတဲ့ အမှုတှအေပွငျ အထောကျအထား စုဆောငျးတဲ့ အဖှဲ့တှေ စုစုပေါငျး (၇) မြိုးမှာ ပါဝငျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ရာဇဝတျမှု ဖွဈခဲ့တဲ့နရောတှဆေီ သှားပွီးစုံစမျးနိုငျဖို့၊ ပွဈမှုကြူးလှနျထားသူတှဆေီသှားပွီး၊ မေးမွနျးခှငျ့မရတဲ့ စိနျချေါမှုမြိုးတှေ မကွာခဏ ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ ပွညျတှငျးမှာ စဈဆေးတဲ့ အမှုမြိုးတှထေကျ ပိုခကျခဲပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လဲ တခွားနညျးလမျးတှနေဲ့ အထောကျအထားတှေ ရရှိအောငျ လုပျနိုငျခဲ့တဲ့ အတှေ့အကွုံတှနေဲ့ ဒီအခကျအခဲတှကေို ကြျောလှားနိုငျပါတယျ။
မေး ။ ။ လကျရှိမှာဆိုရငျ မွနျမာခေါငျးဆောငျတှအေပျေါ ICC, ICJ နဲ့ အာဂငျြတီးနားနိုငျငံက တရားရုံးတှမှော တရားစှဲထားတဲ့ အမှုတှေ ရှိပါတယျ။ အဲဒီအမှုတှအေတှကျရော IIMM က ဘယျလို အဆကျအသှယျလုပျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနပေါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ပုဂ်ဂိုလျတဦးတယောကျအပျေါ မြှမြှတတ တရားစီရငျဖို့ လိုလားတယျ၊ စီရငျနိုငျမယျဆိုတဲ့ နိုငျငံအဆငျ့ နိုငျငံတကာအဆငျ့ တရားရုံးတှမှော အမှုကွားနာစဈဆေးတဲ့အခါ အခကျြအလကျတှေ မြှဝဖေို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ IIMM ကို အဓိက ဖှဲ့စညျးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွဈမှုကြူးလှနျသူတှကေို အကာအကှယျ ပေးဖို့လုပျတဲ့ ဟနျပွစဈဆေးမှုမြိုး မဖွဈရဘူး။ စှပျစှဲခံရသူရဲ့ အခှငျ့အရေးကိုလညျး လေးစားပွီး အမှုမှာ ပါတျသကျနသေူအားလုံးအတှကျ မြှမြှတတ ကွားနာ တရားစီရငျမှုမြိုးဖွဈဖို့ လိုပါတယျ။ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျတရားရုံး ICC နဲ့ နိုငျငံတကာ တရားမြှတမှုခုံရုံး ICJ က အမှုတှမှော IIMM အနနေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့အတှကျ လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီက ကြှနျတျောတို့ကို အထူးတိုကျတှနျးထားပါတယျ။ အဲဒီတရားရုံး (၂) ခုရဲ့ တရားစီရငျရေးက ကှာခွားပါတယျ။ တရားရုံး (၂) ခုလုံးနဲ့ ကြှနျတျောတို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနပေါတယျ။ သငျ့တျောတဲ့ အထောကျအထားတှေ ပေးဖို့လညျး အဆငျသငျ့ပါ။ ဒါပမေဲ့ မြှဝနေိုငျပါတယျဆိုပွီး ကြှနျတျောတို့ကို ခှငျ့ပွုခကျြပေးထားတဲ့ အထောကျအထားတှကေိုပဲ ကြှနျတျောတို့က မြှဝပေါတယျ။
ဒီမှာ VOA သောတရှငျတှကေို အရေးကွီးတာတခကျြ ပွောခငျြတာက ကြှနျတျောတို့ဆီ အခကျြအလကျ အထောကျအထားတှပေေးတဲ့အခါ အဲဒီအထောကျအထားတှကေို တရားစီရငျစဈဆေးမှုတှမှော သုံးခှငျ့ပေးမလားလို့ ကြှနျတျောတို့ဘကျက မေးပါတယျ။ သုံးခှငျ့ပေးပါတယျလို့ ခှငျ့ပွုတဲ့ အထောကျအထားတှကေိုပဲ ကြှနျတျောတို့က မြှဝခှေငျ့ ရှိပါတယျ။ တကယျလို့ သူတို့က မြှဝခှေငျ့ပွုရငျတောငျ ကြှနျတျောတို့ဘကျက ဒီလိုမြှဝလေို့ သူတို့အတှကျ (ဒါမှမဟုတျ) တခွားတယောကျယောကျအတှကျ အန်တရာယျရှိမလားဆိုတာ ထပျပွီး စဉျးစားဆုံးဖွတျပါတယျ။ အန်တရာယျ ရှိနိုငျတယျလို့ ကြှနျတျောတို့က သုံးသပျရငျ တရားရုံးတှကေို မပေးပါဘူး။ အန်တရာယျ မရှိနိုငျဘူးဆိုတော့မှ မြှဝတော ဖွဈပါတယျ။
မစုမွတျမှနျ ။ ။ Thank you so much, Mr. Koumjian. Thank you for giving time to answer the questions.